Iza moa i Martin Vrijland ary maninona izy no manoratra lahatsoratra? Martin Vrijland dia mpanao gazety, mpanoratra ary mpikaroka izay manana tranonkala lehibe indrindra any Holandy ho an'ny tena mpikatsaka ny fahamarinana marina. Tamin'ny taona 2012 izy dia nandao ny asany amin'ny maha-mpitantana varotra iraisam-pirenena ary nanapa-kevitra ny hanao feo hafa. Rehefa […]
Fijery vaovao sy mazava!
Iza no mahatsiaro ireo sehatra avy amin'ny trilogy "The Matrix" avy amin'ny 1999 izay ahafahan'ny mpandalo rehetra hiova tampoka ao amin'ny 'agent'? Hatramin'ny andro nanombohako nanoratra, fanentanana goavana no nanomboka nanakona ahy mainty. Mipoitra ao anaty pejin'ny pejy izay mipetaka manontolo momba ahy sy [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 May 2020	• 7 Comments
Mihabetsaka ny feo mipoitra fa ny coronavirus dia tena noforonina tao amin'ny laboratoara. Izay nisy nanafika ahy tany am-piandohana tamin'ny alàlan'ny fikaontazana an'i Nu.nl, rehefa nanamarika aho fa mety avy amin'ny laboratoara ireo otrik'aretina toy izany, ankehitriny dia ny haino aman-jery mahazatra ankehitriny no mitatitra […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 26 May 2020	• 3 Comments
Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay, ny antsasaky izao tontolo izao dia voatifitra tamin'ny tahotra lalina amin'ny fahavalo coronavirus tsy hita maso. Ny maro an'isa dia tsy mahalala ny fomba tokony hamaritana ny haino aman-jery sy ny politika, miaraka amin'ny piramida hery (izay nijoro hatrizay hatrizay). Saika ny zavatra hitantsika ary noho izany dia mino fa misy loko toy ny […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 25 May 2020	• 14 Comments
Tsy manana iPhone aho ka tsy afaka nandinika azy fa ny tranonkalan'ny Apple dia mazava momba izany. Mampalahelo fa vitsy no mamaky ny fepetra sy ny fepetra alohan'ny fametrahana fanavaozana na fampiharana, fa azonao atao ny mametraka fampiharana fanenjehana ao anatin'ny fanavaozana farany an'ny iOS 13.5 farany. Raha manontany ahy ianao, […]
Ao anatin'ny 33 minitra manaraka, jereo ny Maurice de Hond, ilay lehilahy ao ambadiky ny fitsapan-kevi-pirenena lehibe izay ahafahantsika “mahatoky tanteraka”. Hitan'i De Hond fa ny fandinihana sasany dia mampiseho fa ny fikajiana iray sy sasany metatra dia tsy misy dikany ary ny coronavirus dia mihanaka indrindra rehefa mahantra ny fitrandrahana. I Maurice dia azo antoka fa resy lahatra amin'ny […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 21 May 2020	• 16 Comments
Raha manaraka ny haino aman-jery ianao, dia tsy misy olana any Holandy, afa-tsy ny viriosy corona, izay mbola miboridana toy ny baomba mandrehitra fotoana. Aiza ny asa fanaovan-gazety rehefa mampiseho ny fijalian'ny tena manokana ao ambadiky ny varavaran'ny vavahadin'ny maro? Tsy sarotra ny maka ny tarehimarika RIVM […]
“Ny governemanta dia mangataka anay hanao izany ary manaraka fotsiny aho 'Befehl ist Befehl'. Tsy maintsy atolotra ny nomeraonao sy ny nomeraonao ianao mba hahafahanao manamarina hoe iza no nifandray aminao. Raha tsy manao izany ianao dia mety tsy hiditra amin'ny fivarotana fa afaka miantsena an-tserasera ihany koa ianao ”. Mety izany […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 May 2020	• 12 Comments
Miaraka amin'ny famoahana ny fahombiazan'ny fenitra volamena sy ny fenitry ny solika, ny dolara dia nivadika ho vola izay tsy maintsy hivoaka tsy misy fetra. Antsoinay hoe Fiat vola ilay izy. Ny vola any Fiat dia ratsy amin'ny varotra iraisam-pirenena. Raha ny marina, ny fanaovana pirinty an-tapitrisany maro dia miteraka ny fihenan'ny vola. Satria ny banky foibe amerikana (FED) dia mifehy ny fizotran'ny famoronana dolara ity sy ny dolara […]
Ny demokrasia mivantana dia vahaolana avy amin'ilay horohoro ankehitriny izay nahatonga ny governemanta Holandey handroba ny firenentsika. Endrika demokrasia izay ifidianan'ny vahoaka mivantana ny solontenany amin'ny fifidianana (an-tserasera) azo antoka. Ny olona manana fandaminana vaovao sy ny hatsaran'ny mpitarika dia voafidy. Ny olona manana vato be indrindra no mandresy ny toeran'ny minisitra. Toy izany koa ny […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 14 May 2020	• 5 Comments
Afaka mifoka amin'ny whirlpool ara-bola ianao, araka ny nampiroborobo an'i Robert Jensen tamin'ny fandefasana farany azy, fa inona no mitranga amin'ny volanao? Izaho koa, dia nanatona ho fanohanan'ny nanangana ny Bond manoloana ny raharaham-panjakana, Jordy Zwarts (jereo sary), fa miaraka amin'ny hetsika mitovy amin'ny 5G hatreto izy […]
Mihamivy hatrany ny olona mahita fa ny governemanta manerana an'izao tontolo izao dia te hanao fanovana maharitra amin'ny fiaraha-monina amin'ny fitambarany. Ny "fanidiana mihira" dia miova tsikelikely ho lasa maharitra mandrakizay, izay mila manaonao indray manafaka. Ny normal vaovao dia nanjary metatra sy tapaky ny fiaraha-monina ary ianao tsy maintsy mandoa izany amin'ny tenanao. Azonao atao ny manakarana mpanoro hevitra lafo vidy amin'ny [...]
Total fitsidihana: 2.492.949